zinga sangweji Panel fekitori | China zinga sandwich paneeli vagadziri, Vatengesi
50mm 75mm 100mm ukobvu bepa zinga sangweji paneeli yakachena kamuri chipatara chemishonga mishonga ICU
Iyo yakachena kamuri madziro sisitimu ibhodhi rinogadzirwa nemavara akavezwa simbi machira zvinoenderana zvakasiyana musimboti zvinhu. Mativi mana ebhodhi akasimbiswa uye akanamwa nekuiswa chisimbiso kumucheto. Iyo yekugadzira musangano yakavharwa nekushandisa iyo yekuchenesa bhodhi, uye mamwe masisitimu anogona kushandiswa kuve nohumwe hutsanana. Dhigirii renzvimbo yekusangana neyakagadziriswa mhando yemabhizimusi akasiyana senge chikafu, mushonga, zvemagetsi uye zvimwe zvigadzirwa. Inotora yakanaka yepamusoro PCGI pepa pepa ine EPS yekuzadza. Ruoko rwakagadzirwa neGI kana Aluminium profile furemu.
Inyore pakuisa uye kuputsa, yakanaka yakazara kuita.
aruminiyamu yehuchi sangweji pani ine yakapetwa kaviri magnesium oxide mabhodhi
mwenje uremu aluminium zinga sangweji pane aruminiyamu rinoumbwa pani yemadziro ekushongedza uye kushongedza
bepa reuchi hwesango husina mutsipa sandwich pani ine yakapetwa kaviri magnesium oxide board yechipatara chemishonga chikafu chemagetsi
Stainless simbi yehuchi musangweji paneli
Inotora yakanaka yepamusoro PCGI pepa pepa neuchi hwakawanda huzadza. Ruoko rwakagadzirwa neGI kana Aluminium profile furemu.